Tag: kobaca | Martech Zone
Maxay tahay sababta Martech uu muhiim ugu yahay koritaanka ganacsiga
Tiknoolajiyadda suuqgeynta ayaa kor u kacday tobankii sano ee la soo dhaafay, iskaba daa sannado. Haddii aadan weli aqbalin Martech, oo aad ka shaqeysid suuqgeynta (ama iibinta, arrintaas), markaa waxaad ka fiicnaan laheyd inaad fuusho ka hor intaadan ka harin! Tikniyoolajiyadda suuqgeynta cusub waxay siisay ganacsiyada fursado ay ku dhisaan ololeyaal suuqgeyn wax ku ool ah oo la qiyaasi karo, ku falanqeeyaan xogta suuqgeynta waqtiga-dhabta ah, iyo otomatigga suuq geyntooda si ay u kaxeeyaan beddelaad, wax soo saar iyo ROI kor, iyadoo hoos loo dhigayo kharashka, waqtiga iyo waxtarka la'aan.
7 Tilmaamood oo lagu dhisayo Mashiinka Suuqgeynta Kobaca Guusha
Jimco, Oktoobar 21, 2016 Khamiista, Oktoobar 20, 2016 Jon Corwin
Maaddaama shirkaduhu ay raadinayaan inay ku kiciyaan dakhli cusub wadiiqooyinka aan la baadhin, dadaallada kobcinta ayaa si aad ah caan u noqday Laakiin xaggee ka bilaabeysaa? Sidee ku bilaabataa Waan qirayaa, waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah. Marka hore, aan ka hadalno sababta dadaallada koritaanku u jiraan. Haddii shirkaddu isku dayeyso inay kordhiso dakhliga, waxay ku samayn karaan siyaabo dhowr ah: ballaarinta xadadka alaabada, hagaajinta qiimaha dalabka celceliska, kordhinta qiimaha nolosha macaamiisha, iwm.
Isniin, November 19, 2012 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Bulshada CRM waa mid ka mid ah ereyada u janjeera in si xad dhaaf ah loo isticmaalo oo loo jahwareeriyo. Waxay umuuqataa gebi ahaanba shirkad kasta oo leh astaamo bulsheed inay bilaabeen inay ku kala saaraan codsiyadooda bulshada CRM. Fikradayda, waxaa jira astaamo dhowr ah oo baraha bulshada ay tahay inay lahaato kahor intaysan isugu yeerin Social CRM: Korjoogteyn - awooda lagu kormeero bulshada waqtiga dhabta ah iyo sameynta digniino. Aqoonsiga - awoodda lagu qabsan karo